Ahoana no hametrahana karazana fikarohan'i Amazon amin'ny finday toy ny mpivarotra lehibe?
Ny mpivarotra an-tserasera rehetra dia mahafantatra ny fomba hikarakarana ny vokatra vokatra Amazon. Ny zava-misy dia tsy misy fomba hafa ahafahana mivelona any ho toy ny mpivarotra mavitrika, raha tsy manao izay tsara indrindra ianao mba hanatsarana ny toerana misy anao ao amin'ny fikarohana mba hahitanao ny fitombon'ny isan'ny olona hahita izany. Mariho anefa, fa raha miova mandrakariva ny algorithma amin'ny alàlan'ny karazam-pikarohana A9, ny tsenan'ny Amazon dia mila manitsy tsy tapaka ny zava-misy vaovao. Na izany aza, misy fomba azo antoka afaka manampy anao hahatakatra ny fomba hikarakarana ny vokatra vokatra Amazon mba hahafahan'ireo zavatra entinao hividianana azy any dia ho hitan'ny mason'ny lionan'ny tanjonao. Ary etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hamitana ny fomba tsara indrindra azonao atao.
Ahoana no hametrahana ny Amazon Search Product
alohan'ny zavatra hafa, dia tsy maintsy mamantatra ny ankamaroan'ny teny fanalahidy azonao - temperature readers. Mba hamitana izany asa izany dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny Keyword Planner, fitaovana fikarohana fototra amin'ny alàlan'ny Google ahafahana miditra malalaka. Tena marina, ity mpanampy an-tserasera ity dia fanombohana tsara ho anao hanomboka handinihina ny teny fototra fototra tianao sy ny fisehoan-teny lava fohy. Raha vantany vao vita izany, dia mila manatsara ny lisitry ny sangodisanao ho lisitry ny karazana fohy izay tsy misy afa-tsy ny mozika tsy maintsy mandresy fotsiny. Eny, mety ho toa asa goavana sy maharitra ny asa, saingy sambatra kosa ireo fitaovana maro samihafa natokana ho an'ny fikarohana lalindalina kokoa amin'ny Amazon.
Ity ny toerana ahafahanao misafidy amin'ny: Sellics (tsara indrindra ho an'ny fikarohana voalazan'ny ambaratonga voalohany indrindra momba ny fikarohana Amazon), Sonar (tsara ny hahita ny teny manan-danja rehetra ilaina hametrahana ny vokatrao), LSI Graph (fitaovana maimaim-poana, Tena manampy tokoa ny mahatakatra ny fomba hikarakarana ny vokatra finday ao Amazon - amin'ny soso-kevitr'izy ireo vokarin'ny teny fanalahidy izay mifanaraka amin'ny sokajin'ny vokatrao na ny singa iray izay azonao amboarina), Moz (serivisy fanandramana fikarohana voalohany natao ho an'ny votoaty tsara fanatsarana ny teny fanalahidy manan-danja), Thesaurus (eny, matotra, anisan'ireo fitaovana fikarohana fototra tsy misy fotony indrindra, indrindra ho an'i Amazona - koa nahoana raha ampiasaina amin'ny tombony ho an'ny fifaninanana anao, sa tsy izany?).
Ary ireto ny sisa amin'ireo safidy ampiasaina ampiasaina ary toro-hevitra azo ampiharina tsara amin'ny fikarakarana ny vokatra vokarin'ny Amazon, na dia mbola mpanafatra entana an-tserasera aza ianao, izay azo amidy any voalohany indrindra:
Aza misalasala manolotra fihenam-bidy na zavatra mahavariana tena mahavariana - fomba tena manilikilika ny fanatsarana ny vokatra avy amin'ny vokatra avy am-piandohana.
Ataovy azo antoka fa manome fahafaham-po ny mpanjifanao ianao (tandremo ny fanamarihan'ny Star zao sy ny sanda mandidy anao).
Mitazona ny tahan'ny vokatra azo avy amin'ny vokatra ampy.
Na dia sarotra aza ny manova azy tanteraka, dia manoro hevitra mafy aho amin'ny fijerena akaiky kokoa ny fandanian'ny mpanjifa anao. Zavatra tena manan-danja tokoa izany, indrindra rehefa tonga amin'ny fametrahana ny vokatrao amin'ny vokatra ao amin'ny Amazon ny fikarohana.